Hoteelka QT oo laga furayo Auckland
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Hoteelka QT oo laga furayo Auckland
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka New Zealand • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Investments • News • jiga • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
Hoteelada & Goobaha loo dalxiis tago ee QT waxay ku dhawaaqeen furitaanka sanadka 2020 ee QT Auckland, kaas oo noqon doona hantidii 10aad ee hudheelkii hoteelka ee uruurinta iyo tii sadexaad ee New Zealand, kuna biirta QT Wellington iyo QT Queenstown.
Iyada oo qayb ka ah heshiiska maamul ee lala galayo shirkadda waalidka ee QT Hotels, Event Hospitality & Entertainment (EVENT), milkiilayaasha guryaha Russell Property Group iyo Lockwood Property Group ayaa u beddelaya dhisme hadda jira oo ku yaal Viaduct Harbor - halbowlaha degmada madadaalada Auckland - QT Auckland. Hoteelka naqshadeynta hogaaminaya wuxuu ka muuqan doonaa in ka badan 150 qol, shirar dhowr ah iyo goobo munaasabado ah iyo saxeex cusub oo QT ah iyo fikrad baar
Hogaanka hal-abuurka ee QT Auckland waa wada-shaqeeyihii hore ee QT iyo naqshadeeyaha gudaha Nic Graham, oo abuuri doona gudaha meelo kala duwan oo dadweyne ah oo ku dhex yaal hudheelka, oo bixiya aagag si habsami leh loogu qaabeeyey dadka deegaanka iyo dadka soo booqda inay isu yimaadaan.
"Waxaan ku faraxsanahay inaan helnay qandaraas maamul oo loogu talagalay hudheelka QT ee Auckland, oo ah magaalo muhiim ah oo ka mid ahayd raadadkii QT-da," ayay tiri Jane Hastings, oo ah Maamulaha Isbitaalka & Madadaalada Dhacdooyinka. "Wada shaqeenayada aan la leenahay Russell Property Group iyo Lockwood Property Group, oo ay weheliyaan kooxdeena hibada leh ee hal abuurka QT, waxay hubin doontaa khibrad QT Auckland ah oo xardhi doonta meel u gaar ah oo ku dhex taal magaalada".
Brett Russell, Agaasimaha Russell Property Group ayaa yiri: “Go’aanka loogu badalay 4 Viaduct Harbor Avenue Hoteel wuxuu ahaa mid fudud; goobta xeebta xeebta istiraatiijiga ah oo lagu daro raadadka gaarka ah ee dhismaha jira ayaa ka dhigaya tan mid ka mid ah fursadaha beddelka ugu wanaagsan ee la heli karo. Iskaashi lala yeesho DHACDO si Auckland loo siiyo hoteelkeedii ugu horreeyay ee QT waa mid aad u xiiso badan. Waxaan hubnaa in sumaddan sare ee firfircoon ay noqon doonto meel ay aad u jecel yihiin socotada iyo dadka deegaankuba.
Shaqooyinka waxaa dhameystiri doona Dominion Constructors Limited, oo ah khubaro ku xeel dheer horumarinta hoteellada kuwaasoo dhameystiray tiro sii kordheysa oo mashaariic hoteel ah sannadihii la soo dhaafay. QT Auckland ayaa la filayaa inuu furmo horaanta 2020.
Brunei Ayaa Mamnuucday Dhammaan Waxyaabihii Laga Soo Galay Dalka Indooniisiya Ka Dib Markii La Soo Keenay ...
Shirkadda Southwest Airlines ayaa ku dhawaaqday kuxigeen cusub oo fulin ...
Maxaa Ka Dhaca Vegas Waa In Maskaxda La Dhigo